एउटा गाउँ, जहाँ पहिरो खस्दा स्थानीय खुशी हुन्छन् ! - Nayabulanda.com
५ भाद्र २०७५, मंगलवार ०८:३५ 83 पटक हेरिएको
डोटी : हर रात सपनीमा ऐठन हुन्छ, सायद गाउँमा पहिरो गयो कि…. गायक दीप श्रेष्ठको यो गीतले धेरैको मन छुन्छ ।
यहाँका बासिन्दा गाउँमा पहिरो जाँदा दुस्खी हुँदैनन्। बरु अचम्मैसँग खुसी हुन्छन्। गाउँ नजिकैको सिल्लभीरमा पहिरो जाँदा कुनै जनधन क्षति हुँदैन, बरु गाउँलेको आयस्तर बढ्छ।
खसेका पत्थरले छानो छाए पनि भयो अथवा बजार लगेर महँगो मूल्यमा बेचे पनि भयो। जे भए पनि पहिरो आयो कि गाउँमा रौनक छाइहाल्छ। पहिरो खस्नेबित्तिकै तँछाडमछाड सुरु भइहाल्छ— पत्थर बटुल्न।, आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।